1. Dagaaloogayaasha Soomaaliyeed iyo wixii ku caqli ah. 2. Tigreega iyo wixii ku xiran (Yemen, Jibuuti,�.iwm.) 3. Cadowga kale ee dibadda oo u horreeyo maamulka Bush iyo wixii raacsan. Muqaawamada, Abuu Mansuur iyo Soomaali badan weli meeshoodii bey taaganyihiin halka sheekh Shariif bilaabay inuu cadowgii ku soo koobo Itoobiya oo keliya! Wuxuusanba fahmin in dagaalkii uu ku soo caanbaxay uusan la gelin Itoobiya ee uu la dagaalay dagaaloogayaal ay soo kireysteen maamulka Maraykanka haddaad rabto dheh CIA. Dagaaloogayaashu waa cadowga koowaad ee Soomaaliya. Wixii dowladdii hore geysatay ma Zenawi baa geystay? Wixii Caydiid iyo dagaaloogayaasha kale geysteen ma Zenawi baa shuqul ku lahaa? Markii USC-du Koonfurtoo cagta marinesay; Zenawi cidna ma aqoon welina ma noqon ra�iisul wasaare. Marka hadda ma la fahmay in cadowga koowaad yahay dagaalooge iyo waxa la shaqeysta? Abuu Mansuur waa ogyahay oo waa isaga dhaha lama fariisanayo C/hi Yuusuf, Nuur-cadde, Cabdi Qeybdiid, iyo Maxamed-dheere halka Shariifku diyaar u yahay in uu wax la qeysado. UN-ka uu sheekh Shariif ka sugayo iney wax u qabato; Abuu Mansuur wuxuu u arkaa qolo u shaqeysa maamulka Maraykanka. Dhabcan waa saas. Kama hadleyno hay�adaha gargaarka ee waa Golaha Amniga. Is-caawintu waa ka dhaxeysaa binu Aadamka. Markaan Tigreega ka hadleyno kama wadno waxaan la dagaaleynaa qof kasta oo u dhashay Itoobiya. Soow dad u dhashay Itoobiya ma joogaan Boosaaso? Hargeysa, Gaalkacyo iyo meelo kale? Haa. Waa dad qaxootiya oo u baahan in sidii loo caawin karo loo caawiyo. Marka hay�adaha gargaarku halkaas bey soo galayaan. Maamulada Maraykanku waxay Golaha Amniga ugu shaqeystaan labo siyaabood: 1. Qofkii Maraykanku maaro u waayo wuxuu ka dhigaa sidii qof aan dabaal aqoon oo biyo lagu tuuray (wuu xanuujiyaa oo laayaa). Dabadeedna wuxuu Golaha Ammaanka ku dhahaa iska dhiga qof badbaadinaya oo soo qabta. Ka warran qof biyo ku haftoonaya ma diidayaa cid caawisa? Taasaa keentay markii sheekh Shariif u adkeysanwaayey kaneecadii, dukheyntii kaarayaasha iyo madaafiicda Itoobiya iyo tii diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayuu yiri Ilaahoow yaa mar gacanta i qabta. Nasiib-darro waxaa gacanta ku dhigay CIA iyo UN-ta. Muqaawamada kale oo Ilaah ku xiran waxaa badbaadiyey oo dabaasha baray Ilaah. Marka meel kasta ooy tagaan waa badbaadaan. Golaha Amnigu intuusan gacanta ku qaban wuxuu shuruud kaaga dhigayaa inaad ogolaato waxay wataan. Waxay iska dhigaan iney maamulka Maraykanka ka madaxbannaanyihiin oo ay dhexdhexaad yihiin. Laakiin si ka khiyaamo badan seddexdaas cadow ayey noola xaalaan. 2. Haddii qof Soomaaliya oo raba inuu dadkiisa Soomaaliyeed ee biyaha ku hafanaya ka badbaadsho waxaa isa soo taagaya Golaha Ammaanka oo oranaya: adigu waxaad ka timid Koonfur marka ma badbaadin kartid qof ka yimid Punltand iyo Somaliland. Waxay leeyihiin haddaan kuu deyno waad sii hafineysaa/quusineysaa! Marka raalli ahoow oo ku ekoow qabiilkaaga! Iyaga keliya wax badbaadsha! Markaad guuleysato iyagaa ku hor istaagaya. Soow iyaga ma ahayn wixii maalmo ka hor intaan Zenawi soo weerarin Xamar kuwii qaaday cunaqabateynta hubka? Waxay dhaheen qeyb ka mid ah! Zenawi waa cadow oo waa la fahmi karaa weerarkiisa laakiin waxaa ka liita kuwa iska dhigaya iney adduunka metelaan oo sidaas oo kale cadowgaaga ula shaqeynaya. Marka kuwii shalay sheekha dharbaaxay ayuu hadda isu dhiibay. 3.Waxaa kaloo muhiin ah in aan milicsanno markii dagaaloogayaasha laga saarayey Xamar waxaa hub-wareejinta tagijiray oo ka khudbeynjiray rag ay ka mid ahaayeen: Ceyroow iyo Abuu Quteyba Allaha u naxariistee sidoo kale waxaa ka mid ahaa Abuu Mansuur, Fu�aad Shangole iyo sheekh Shariif. Qof kasta oo khudbad jeediya wuxuu oran jiray waxay ka tahay dar Ilaah. Waxay sheegijireen iney u istaageen iney dalka ka difaaceen cadowga gudaha iyo kan dibadda (seddexdii cadow ee kore). Markii Itoobiya qabsatay waddanka Xasan Daahir Aweys, Abuu Mansuur iyo Fu�aad Shangole waxay joogeen Xaramka. Sheekh Xasan iyadoo Xajkii maalmo ka dhimanyihiin buu dib ugu soo noqday Xamar. Ma oday lix sano ka weyn baa isagoo Xaramkii jooga dib u soo noqday si uu Itoobiya ula dagaalo? Yaa sameyn kara? Kolley anigu ma sameyn karo. Abu Mansuur iyo Fu�aad Shangole markey Xajkii dhammeysteen ayey iyana saaxiibadoow oo ku go�doonsanaa keymaha ku soo laabteen. Iyana waa ka dhabeeyeen ilaa hadda ballantii ay qaadeen. Yaa sameyn kara? Kolley anigu ma sameyn karo. Sheekh Shariif oo BBC-da ka lahaa ma jiro cid nooga badan halganka in kastoo la heli karo cid iila mid ah! Soomaalaay maanta idiinkaa markhaatiya ee arrinta marag ka noqda. Miyaan sheekh Shariif markuu u adkeysan waayey kaneecadii dhoobeyda sidoo kalana ay jiif iyo joog u diideen daryankii madaafiicda iyo gantaalaha Itoobiya iyo Maraykanka uusan soo aadin xadka innaga iyo Kenya noo dhaxeeya? Miyuusan soo-dhoweyn ka helin mid ka mid ah seddexdii cadow �maamulka Bush? Halka Abuu Quteyba uu ku dhintay dagaalladaas miyaan sheekh Shariif lagu soo dhoweyn daaro ku yaal Kenya? Ilaah baan idin ku dhaarshee ma la simi karaa raggaas iyo sheekh Shariif? Sida Ilaahay Qur�a